Xarunta tijaabada ee COVID ayaa laga furay garoonka diyaaradaha magaalada Belfast
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Xarunta tijaabada ee COVID ayaa laga furay garoonka diyaaradaha magaalada Belfast
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Investments • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Xarunta imtixaanku waxay bixisaa PCR dhakhso ah oo la awoodi karo iyo antigen (socodka dambe)
Furitaanka xarunta ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dib loo bilaabay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee ka imanayay garoonka diyaaradaha magaalada Belfast
Duulimaadyadu waxay maanta dib uga bilowdeen Magaalada Belfast ilaa Amsterdam Schiphol Airport
Tijaabooyinka, oo ay tahay in horay loo sii qabsado, ayaa sidoo kale loo heli karaa xubnaha aan duulimaadka ka ahayn dadweynaha guud
Gegada Diyaaradaha ee magaalada ugu wanaagsan George Best Belfast ayaa maanta laga furay xarun cusub oo lagu tijaabiyo COVID-19 oo ay lasocoto shirkad hogaamisa baadhitaanka caalamiga ah, Randox.
Xarunta tijaabada, oo ujeedkeedu yahay dhisida shirkadda Belfast ee H&J Martin, waxay siisaa PCR dhakhso iyo qiimo jaban iyo tijaabooyin antigen (lateral flow), furitaankeedu wuxuu ku soo beegmayaa dib u bilaabashada duulimaadyada caalamiga ah ee ka imanaya Belfast City Airport.
Maamulaha Hawlaha Madaarka, Judith Davis, ayaa sharraxay:
Duulimaadyada ayaa maanta dib u bilaabmay laga bilaabo Gegada Diyaaradaha Magaalada Belfast Madaarka Amsterdam Schiphol Airport oo ay weheliyaan shirkadayada wada shaqaynta la leh KLM, taas oo ah tillaabo kale oo togan oo ay shirkadaha duulimaadyada ee adduunka oo dhami dib u dhiska iyo dib u bilaabayaan shabakadahooda.
“Waqtigan xaadirka ah Dowlada Dutch waxay ubaahantahay dhamaan rakaabka soo galaya Nederland inay qaataan oo ay sooceliyaan natiijo taban labadaba baaritaanka PCR iyo kan antigen (lateral flow). Bixinta adeeggan goobta ayaa ah raaxada ugu dambeysa ee rakaabkeenna, taas oo ah wax aan ku faanno oo aan si joogto ah ugu dadaalno kor u qaadista. ”
Tijaabooyinka PCR iyo tijaabooyinka antigen ee Randox ayaa laga heli karaa garoonka diyaaradaha magaalada Belfast. Faahfaahinta Judith faa'iidooyinka ay siiso dadka Waqooyiga Ireland.
“Tijaabooyinkan, oo ay tahay in horay loo sii qabsado, kaliya looguma talagalin rakaabka ka duulaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Belfast ee waxaa sidoo kale diyaar u ah dadka aan duulin ee dadweynaha.